Wafdi culus oo oo Mareykan ah oo gaaray HARGEYSA - Caasimada Online
Home Somaliland Wafdi culus oo oo Mareykan ah oo gaaray HARGEYSA
Wafdi culus oo oo Mareykan ah oo gaaray HARGEYSA
Hargeysa (Caasimada Online) – Magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland waxaa maanta gaaray wafdi ka socda dowladda Mareykanka, kuwaas oo ka dagay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaas, halkaas oo si billaaran loogu soo dhoweeyey.
Wafdigan ayaa kasoo kicitimay dhanka dalka Jabuuti, waxayna isugu jiraan diblomaasiyihiin iyo saraakiil ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Mareykanka.
Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in xubnahan uu horkacyo taliyaha ciidamada Maraykanka ee saldhiggoodu yahay dalka Jamhuuriyadda Jabbuuti, iyada oo loo galbiyey dhanka madaxtooyada, halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in xubnaha wafdigan ay booqan doonaan Dekadda magaalada Berbera oo ay gacanta ku heyso Shirkadda DP World.
Illaa iyo hadda ma jiro wax faah faahin oo ay xukuumadda Hargeysa ka bixisay socdaalka wafdiga Mareykanka ee gaaray magaaladaasi.
Booqashadan ayaa daba socota socdaalkii uu dhowaanMuuse Biixi ku tegay Mareykanka, isaga oo kulamo lasoo yeeshay madax ka tirsan dalkaasi iyo Jaaliyadda Somaliland.
Si kastaba, Mareykanka ayaa u muuqda mid wax ka beddlay farsamooyinka uu kula macaamilo Somaliland, wuxuuna sii xoojiyey xiriirka kala dhexeeya maamulkaasi.